बिनिशा श्रेष्ठ - मेरो आठ वर्षे छोरो मलाई प्रायजसो सोध्छ, “ममी किन हाम्रा सबै आफन्त नेपालमा छन् र हामी मात्रै यता अमेरिकामा छौ ? मलाई किन स्कूलमा ह्वेयर आर यु ओरिजिनल्ली फ्रोम भनेर सोध्छन्, किन हाम्रो छाला ब्राउन छ ? यस्तै यस्तै के के हो के के ?' म धेरै पटक त…
रवीन्द्र अंकल, के कास्कीले हजुरजस्तै विकासप्रेमी नेता अब पाउला ?
रोहन नेपाली | आदरणीय, रवीन्द्र अंकल । नचाहँदा नचाहँदै हजुरलाई बिदाई गर्नुपरेको छ । मन भारी भएको छ, आँखा ओभाउन सकेको छैन । र, अझै पनि यो मनले स्विकार्न सकेको छैन । मानसपटलमा अझै तपाइको त्यो हँसिलो मुहार, फरासिलो ब्यवहार र प्रेरणात्मक बोली जिवन्त रुपमा घुमिरहेको छ, गुञ्जिरहेको छ ।…
बेसार अर्थात महाऔषधी
डा‍. अरुणा उप्रेती मेरी हजुरआमाले मेरो खुट्टा मर्किंदा बेसार दूधमा मिसाएर , रुघाखोकी लाग्दा पानीमा बेसार पकाएर खुवाउनुहुन्थ्यो । घाउ पाक्दा घिउमा मिसाएर बेसार लगाइदिनुहुन्थ्यो । बेसार छालामा राम्ररी शोषण हुन चिल्लो चाहिन्छ भन्ने ज्ञान लेख्न–पढ्न नजानेकी मेरी हजुरआमालाई कहाँबाट थाहा भयो ? सायद उहाँले आफ्ना आमा, हजुरआमाबाट सिक्नुभयो होला…
पोखरा, फागुन १० संसारमै आजसम्म परिभाषित हुन नसकेको शब्द होला–‘प्रेम’ । प्रेमलाई विद्वान्हरूले आ–आफ्नै विचार र तर्कमा फरक ढंगले परिभाषित गरिएको पाइन्छ । यद्यपि प्रेमलाई दुई आत्माको मिलन भन्नेहरूको संख्या अलि बढी नै हुन्छ । प्रेम त्यस्तो भावना हो जसले आफूवरपर मात्र नभई सारा संसारलाई नै सुन्दर देखाउँछ भन्नेहरू पनि…
जुना थापा - तिम्रो लागि बनाएको दिलमा एउटा सहर छ त्यहाँ एउटा प्रेमको घर बन्ला भन्ने ठहर छ बन्दकी मेरो मुटु फर्काउन कैले आउँछौ प्रिय , दिलको लालपूर्जा तिमलाई सुम्पने रहर छ ... अन्तर्मनको सहयात्री प्रिय देव ! खै के भनेर सम्बोधन गरुँ, यतिका वर्ष भए शब्दकोशमा चहारेको तिम्रो र मेरो सम्बन्धको…
सावित्री गौतम ‘सेलिब्रिटी’ हरूका आमाहरूसँग कुराकानी गरिने एउटा नेपाली टिभी कार्यक्रम हेरेको, एकजना आमा भन्दै थिइन्, ‘छोराछोरी सबै सही लाइनमा लागे, बिग्रेनन्, ‘लभ’ ‘सभ’ गरेर हिँडेनन् ।’ यसको अर्थ हो, हाम्रो समाजमा अझै पनि वयस्क युवायुवतीबीचको प्रेम सहजै स्वीकार्य भइसकेको छैन । आफ्नो प्रेमी या वैवाहिक जोडी आफैंले छान्नेहरूलाई अझै पनि बिग्रेको…
जक्सन डटकम पोखरा, फागुन ३ युरिक एसिड बढ्नुलाई चलनचल्तीको भाषामा यसलाई बाथ रोग भनिन्छ । जब शरीरमा युरिक एसिड बढ्छ, हाम्रो जोर्नी दुख्न थाल्छ । कतिपय अवस्थामा त हिँडडुल गर्नै गाह्रो हुन्छ । शरीरमा प्युरिन नामक तत्व टुक्रन्छ, तब शरीरमा युरिक एसिडको समस्या देखिन्छ । शरीरका कोषिका टुट्ने नयाँ बन्न…
एकजमना थियो, उमेर नपुग्दै विवाह गर्ने । अर्थात १० वा १२ बर्षको उमेरमा विवाह गरिदिने । छोरीलाई ‘कन्यदान’ दिएपछि स्वर्ग पुगिन्छ भन्ने सोचाईले कलिलै उमेरमा छोरीको विवाह गरिदिने चलन थियो । धेरै पर पुग्नुपर्दैन, हाम्रा पिता-पूर्खा पनि यस्तै परिवेशबाट गुजि्रए । उनीहरुले त्यस्तो उमेरमा विवाह गरे, जतिबेला उनीहरुलाई दाम्पत्य जीवनबारे…
जक्सन डटकम पोखरा, माघ २९ युवा लेखक निश्चल मल्लले अंग्रेजी भाषामा लेखेको उपन्यास ‘फर्गो’ सार्वजनिक भएको छ । मंगलबार अभिनेत्रीहरु ऋचा शर्मा, सुरक्षा पन्त, लेखक सुविन भट्टराई र इक्यानका अध्यक्ष विष्णुहरि पाण्डले पुस्तक संयुक्त रुपमा सार्वजनिक गरे । पुस्तक सार्वजनिक कार्यक्रममा बोल्दै ऋचाले लेख्ने मान्छेप्रति आफ्नो मनमा श्रद्धा रहेको बताउँदै…
लापरबाही कस्को ?
म्याग्दीको नुनखानी कहिले उत्खनन् हुन्छ ?